Yaman: Xoogagga Cali Cabdalla Salax oo qabsaday garoonkii Sanca – Kasmo Newspaper
Updated - December 2, 2017 1:57 pm GMT
London (Kasmo), Wararka ka imanaya Yaman ayaa ka warramaya in xoogagga daacadda u ah Madaxweynihii talada lagaqaaday, cali cabdalla Salax, kala wareegeen Xuutiyiinta, Garoonkii Sanca. Warkaan waxaa soo diray wariye goobta uga soo warrama idaacadda afka Carabiga ku hadasha, Al-Arabia.
Dagaallada dhexmaraya 2da dhinac ee fallaagada ah, horeyna u ahaa xulufada, waxay galeen maalintii 4aad maanta, markii xabbadjoojin koobaneyd la jabiyay xalay, saacado yar uun ka dib markii la gaaray.
Iska horimaadyada ayaa la sheegay in ay markii hore ka bilowdeen, 29kii Nofember 2017, agagaarka Masjidka Dhexe ee Sanca, halkaas oo Xuutiyiinta la sheegay in ay isku deyeen in ay la wareegaan.
Wariyaha Al-Arabia ayaa soo xiganaya dad fara badan oo maqlay dhawaqa rasaasta, laakiin wali ma jiro tirakoob rasmi ah oo dhimasho iyo dhgaawac ah.
Dagalka sokeeye ee Yaman waxaa ka dhashay barakaca in ka badan 2 malyuun oo qof, daacuun safmar ah, macaluul iyo geerida in ka badan 10,000 oo qofood oo rayid u badan.
Wuxuuna sii darsaday intii Sacuudiga iyo xulufadiisu la soo safteen Xukuumadda Hadi ee dagaalka kula jirta Xuutiyiinta, markaas oo ay ka dhalatay, waxa Qarammada Midoobay, ku tilmaameen dhibaatadaii aadami ee ugu weyneyd dunida.